Ciraaq: ISIS oo qabsatay magaalo istiraatiiji ah - Wargane News
Home Somali News Ciraaq: ISIS oo qabsatay magaalo istiraatiiji ah
Maleeshiyaadka kooxda la baxday ISIS ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalo muhiim ah oo ku yaalla gobolka Anbar kadib weerar culus ay kusoo qaadeen.
Magaaladan oo la yiraahdo al-Baghdaadi ayaa 8-km keliya u jirta xarun ay leeyihin Ciidamada Cirka dalka Ciraaq oo ay hadda fariisin u tahay Ciidamo Mareykan ah, waxaana surtagal ah in ISIS ay duqeyso xaruntaas iyagoo ku sugan magaalada ay la wareegeen.
Fariisinka Ciidamada Cirka ayaa lagu tababara Ciidamo Ciraaqi ah oo loogu talo galay in ay la dagaalamaan Daacish, waxaana siiya Saraakiisah Mareykanka
Qabsashada al-Baghdaadi waxaa saxaafadda u xaqiijiyey Saraakil ka tirsan waaxda Difaaca Mareykanka ee The Pentagon iyagoo sheegay in Ciidamada Ciraaq oo magaalada hore u haystay ay iska caabiyeen weerarka balse markii dambe dagaalyahanada Daacish ay u surtagashay in ay magaalada la wareegaan.
Sarkaal la yiraahdo Rear Adm John Kirby ayaa walaac ka muujiyey qabsashada magaaladan oo kamid ahayd magaalooyin faro ku tiris ah ay Ciidamada Ciraaq haysteen, wuxuuna tilmaamay in aan la dhayalsan Karin haba yaraate.
Mareykanka ayaa weli ka fikiraya surtagalnimada in Ciidamo uu u diro dalka Ciraaq si ay uga caawiyaan dowladda taagta daran la dagaalanka xoogaga Daacish.